DAAWO: Wasiir Beyle oo afka furtay “ilaalinta miisaaniyadda dalka ayaa ku waayay kursiga Xildhibaanimo” – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Wasiir Beyle oo afka furtay “ilaalinta miisaaniyadda dalka ayaa ku waayay kursiga Xildhibaanimo”
January 25, 2022 Xuseen 18
Wasiirka Maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa shir ja’raaid oo uu qabtay waxa uu ku sharraxay sababta uu ku waayay kursiga xildhibaanimada oo uu muddo ku fadhiyay.
Wasiir Bayle oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kursigiisa Hop201 uu ku waayay arrimo badan oo ku saabsan howlaha miisaaniyda oo uu iska diiday.
“Waxaan doonayaa inaan dadka Soomaaliyeed la wadaago aniga waxaan runtii halkaan u jooga inaan maamulo miisaaniyadda dalka, xildhibaan haddii uusan wasiir la socon kolayba aniga ma joogeen, sharaf weyn ayey ii tahay inaan xildhibaan ahaado laakiin haddaan tayda ka hadlo miisaaniyadda iyo dhakhaalaha dalka inaan u maamulo si sharciyeysan ayaan jooga.” Ayuu yiri wasiir Bayle.
“Waxwalba oo carqalad yar u keenaya habsami u socodka maaliyadeed anigu waan iska leexiyay, marka si ayaan u arkay in kursigii iyo maaliyaddii ay isku taabanayaan.” Ayuu wasiirka raaciyay.
Kursiga Golaha Shacabka ee 8-dii sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxaa Maanta loo doortay Dr Cabdullaahi Xaashi Abiib.
𝐂𝐀𝐋𝐀𝐅 𝐊𝐀𝐀𝐆𝐀 𝐖𝐀𝐀𝐍 𝐒𝐎𝐎 𝐂𝐔𝐍𝐓𝐀𝐘 𝐌𝐔𝐃𝐎 8 𝐒𝐀𝐍𝐎 𝐀𝐇 𝐖𝐀𝐀𝐍𝐀 𝐊𝐔 𝐌𝐀𝐇𝐀𝐃 𝐒𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐇𝐀𝐘 𝐖𝐀𝐗𝐈𝐈 𝐖𝐀𝐍𝐀𝐀𝐆 𝐀𝐇𝐀𝐀 𝐀𝐀𝐃 𝐔 𝐐𝐀𝐁𝐀𝐓𝐀𝐘 𝐖𝐀𝐃𝐃𝐀𝐍𝐊𝐀 𝐒𝐎𝐌𝐀𝐋𝐈𝐀.
40 kun malyan oo aad tiri turkiya taala meel ku sheeg so mahaysatii inta kuu hartay waxaad ku noolaatid ini biixi wuxu yiri ku xamar naga aaday hargesa dabqyo ka wada dhisteen
Bayle waa hayley qaran rooble
Baahane ayaa ah ninka kalumay
Wadadii uu kudhalatay waxaana
Run ah in aay foolxumo udanbaysonto gunti giijiye
Damaljiid liito oo dhulka
Isudhigay farmaajo ayuu ahaa
Laakiin ogow dadka qiimaha qaranka ulah ee aad target
Kadhimatay in lagaaraci doono
Oo maydakaada baqtiga ah
Meel Howad ah ama kayn ah lagahalidoono sidii ninkii
England udhashay ee iraaq kucadeeya
Mahaystaan unclear wopounes
Ninka payla kareebay kuraasta
Parlamanka somalia waxaas miyaan firsan karnaa somali
Asc all of you somali
caqli ahmed says:
Bayle sow maaha ninka bixiyey ama ka aamusay in Galmudug 45 million lagu cuno, in CBB cayayaanka barana Bulshada ee aad ka mid tahay cashuurta masaakiinta mushahr loogu qoro, sow kama aamusin 3000 qof oo Samar huteelo ku seexda halka abaarta, haraadka iyo baro-kacayaasha baahi dishay. Sów ninka Fahad Yaasiin miisaaniyadda NISA xaddidi kari waayey ma aha, dameerka meesha iska fadhiyey ha baxo, Hargeisa iyo Borama ayun fooqyo ka dhistay uu qirtay,
Waa caadada CBB inay ammaanto goonbaarta , dadka fiicanna ay caayaan
Wasiir Beyle iyo kuwa la midka ah waa kuwa Somalia curyaamiyey ee fadhiidka ka dhigay. Kursiga wuxuu u waayey inuu yahay qowsaar Farmaajo iyo inuu ka mid yahay tuugta waaweyn ee boobay xoogaagii dalkan dhulka yaalla loogu deeqay. Haddii uu ummadda wax u dhaqaaleeyey maxaa lagu qabtay? Muxuu faa’iiday qofka caadiga ah ee Soomaaliga ah intii Beyle khasnadda hayey? Waxba. Ha ii sheegin deyn baa la cafiyey iyo ciidammada Turkigu tababaray ee laga dhigay maleeshiya Farmaajo adeegsado oo aan waxba kusoo kordhin nabadda dadka iyo dalka.
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin waxaa dul-hoganaya gudcur iyo saadaal aan wanaagsanayn; mid kale oo tiirarkoodii ah ayaa ruqay. ‘ Ar booye, lug hartay dheh.’
Waa yaabe nin 8 sano kursi haystay maxuu hadda ugumusanaabayaa?Soo iimaan daro ma aha?
Soo ma aha nidam xumada ay soomaalida waayahaan caanka ku noqotay?
Oo Dr. Beyle malxiis & caruusad midna ma waayey?!
Aniga ninkan hadal baa iga raacay, kaas oo iftiiminaya xaalka jamhuuriyaddu halka uu marayo. Waxa uu si “qiiraysan” u yidhi, “haddii aysan ‘xildhibaanimada’ ii wehelin ‘wasiirnimo’, maba joogeene waan iska tagi lahaa!” Qofkii fahmi kara ayaa fahmaya “fashilaadda dawladnimo” ee ku hoos duugan hadalkaas uu yiri.
Beyloow, haddii adiga oo xildhibaana lagaa dhigay wasiir, waddankuna uu yahay waddanka sidaa u kala qalan ee dhulka galgalanaya, oo uusan garsoor lagu hirtana jirin; yaa kula xisaabtamaya??? Sidee baad iiga dhaadhicin kartaa ammaano xejis baan ahay, iyada oo aysan jirinba cid kula xisaabtanta maaddaama aad wasiir & baarlaamaanba isku qaadatay?
Hadalkaas waxaa kaa keentay caradii aad ka qaadday xildhibaanimada aad weyday; waa hadal kaa fakaday, oo iftiiminaya sida aad u soo wadashaqo tagteen. Laba laba jinsiyadood baa la wataa, oo laba laba xil baa la hayaa (baarlamaan & fulin) oo garsoor hadalkiisa haba sheegin, haddana inta shaashadaha la soo horfadhiisto baa la rabaa in sidii la doono la isaga hantaataco; bulshada Soomaaliyeed baa laga arkay in sidaa loola dhaqmo.
Waxa kale oo inta badan dadkii daawaday ay aad ula yaabeen nin sheegta waxan ay Prof. yiraahdaan; waa Cabdi Samatare. Waxa uu la hadlay qolyihii soo dirsaday ee uu “basaaska” u ahaa. Sideedaba qof wata laba jinsiyadood oo sheeganaya “madax” waa basaas. Waa in uu laba jinsiyadood mid celiyaa, yuu daacad u yahay? Idinku waxa aad ka hadlaysaan waddankan burburay, bal kawarama haddii xildhibaanad ka mid ah waddanka Ingiriiska, looga shakisan yahay in ay basaasad tahay?!
Gunaanadkii, Dr. Beyle, isaga oo mahadsan, hadal u qarsanaa duulkan laba-labada jinsiyadood wata ee jamhuuriyadda u soo shaqo tagay & kuwa gudaha joogay ee ku mamay luggooyada shacabka buu si aan ku talagal ahayn bannaanka u keenay.
@Hillaac,AfSomaligu waa margi (elastic) sidii uu u wasiirku hadalka u dhigay aniga oo og in aad sida ay yahay u fahmay,haddana si kale ayaad u dhigtay,waase ciddii kaa dhageysata,wasiir Beyle waa ninka Somali Maryooleey dhiiqadii ay 30+ sanadood lugaha kula jirtay ka Soo saaray,in aan ammaanno ayey ahayd,midda kale maa og yahay in micaaradku ay xalayto gurigiisa weerareen oo isku dayeen in ay dilaan? Somalia horay ayey u soconaysaa,SNM,SSDF,USC iyo SPM haraadigooda looma joojinayo,Tareenka waa socday kii ka hara Dabbaal waaye.
Guryaha daqaqyada ah ee laga dhisayo Hargeysa iyo Boorame waa hantidii qaranka oo aad ilaalisay sow maaha?
Waar illaa hadal aaaa ma yiraahdo.
Orgi harrag shabeel xidhani haduu shaamiye aar shaarubaha ka leefo..shaffka uukasoo galo..shan-shadiisa cheer &_ jabka yaa la waydiin?.
Iskaga soo noqo Tower kii Hargeisa ka dhisatay hawiye waa toosaye.
Allow hawiye toosay ha naga dhigin, illaa waxba ma xeeriyaane. Waar malaha hurdadoodaa u roon. Intay dadka kale yeelayaan intay is yeelayaan ayaa ka daran.
Juba-lander, eegga, odayga hadalkiisu waa cad yahay. Tuug wada shaarba waaweyn baa noo soo shaqo tagay. Wasiir ahna xildhibaan!!! Adeer waddankaan tacbaanka ahi ma qaadi karo kaligii waddani & kaligii aammin. Maaddaama aan isbeddel & nidaam dawli ah loo socon, oo dad & duunyaba la boobahayo, waxa dhaanta mid tuuganimadiisu caddahay sida Xasan-shiikh kooxdiisii & Rooble & kooxdiisa.
Waad ogtahay oo sannad walba “musuqmaasuqa & dawladnimo xumada” hoostaynu galnaa, waayo wax lagugu cabbiroba maadan samaynin; marka, sidee laguu qiimeeyaa? Garsoor wax laga fahmi karo ma aadan dhisin, oo baarlamaankii waa kan hadda Beyle ka hadlayo sida ay fulintii u afduubatay oo heshiis bulsho oo maangal ah maba lihid; muxuu marka ii sheegayaa Beyle?
Haddayse ugu darantahay, ra’iisal wasaarihii ku eedaysnaa “tuugada” baa la soo taagan dad baan bari yeelay oo argagaxiso ka saaray!!! Isagii bay ahayd in xabsi la dhigo. Heer kaas baynu maraynaa. Ninkii tuuganimada caddaystayna waxa uu ka dhigtay “wasiir amni”!!! Sida loo soo xulayo baarlamaankii waa idinka arkay. Madaxweynaha ay kuwaasi dhalaan kawarrama? Iska daa cidkala e, xitaa Deni baa u soo xeyd-xeydan, waayo waa meel lagu jabay. Waar nin yahay hadalka ha iga wada keenine nabadeey.
Waraabaha aamusan iyo kan qayliya kee xun, Beyle tuugadiisa wuxuu ku qarinayey aamusnaan iyo edeb, sida tuugta Hawiye ma lahayn shan air iyo shan million, wixiisii aamusnaan buu ku cunayey, Somaliland waa laga soo dhoweynayaa oo waxoogaagoodii hore ayuu ugu diray dhawr iyo toddan inan oo Samaron iyo Isaak Mahna meelahaa u dir, waar odaygu kubadda si fiican buu u ciyaaray wuxuu la qabsan waayey M Rooble, oo wuxuu kala garan waayey in Farmaajo Xamar marti ku yahay oo ay ku filan tahay, gurigayga ii dhaaf, sidii qolooyinkii kale ee reer Woqooyi; Dubbe iyo Mahdi wuu is daad raacin waayey, malaha Buur-madow wax cashar ah kama qaadan. Galbataye nasiibkaa, calaf waa mar qudha iyo waxaad cuntay, cashadii tagtana lama soo ceshee fooqaagii aad.
‘Orgi harag shabeel xiran
Hadduu shaambiyow aar
Shaarubaha ka leefoo
Shafka uu kasoo galo
Shanshadiisa dheer iyo
Shirixyada ka buuxsado
Shilka yaa la weyddiin?’
Xusuus: kooxdii Iftiin ee Wasaaraddii Waxbarashada iyo Barbaarinta
Maaloyada ma ganacsi aad adigu leedahay weeye waxaan bal arka waa ba maqalnee
“Wasiir ahna xildhibaan!!!”
Sida waafaqsan hannaanka dimuwraaddiga, in uu shakhsi wasiir noqdo waxaa kahorreeya oo shardina u ah in uu marka hore xildhibaan yahay. Nimaan xildhibaan ahayn wasiirba ma noqon karo.
Kuwaasi lama mid aha jamhuuriyad burburtay oo dib la isugu kabkabayo sida Soomaaliya. Waxa aad ka hadashay meel xisbiyo ka jiraan oo maxkamado laandheere ahi ka jiraan. Intaas waxaa dheer, waxa ay ku xiran tahay waddan walba xeerkiisa bulsho; waayo, waddamadu isku baahi & duruufo ma aha.
Tusaale, waxa aan dhowaan daawaday ninka la yiraahdo “Ruto”, ee madaxweyne ku xigeenka ka ah waddanka aan deriska nahay ee Kenya, isaga oo durayey wax ay ugu yeeraan BBI. Waxa uu ku durayey in dastuur beddelku uu horseedayo “kaligii talisnimo” laga soo gudbay, oo ah in “xildhibaanka laga dhigo wasiir” si aan xukuumadda loola xisaabtamin. Marka, sidaas bayna waddamadu isku xeerar & duruufo u ahayn.
Dhinaca kale, qodobka ugu horreeya dib u eegista heshiiska bulsho ee jamhuuriyadda, inta aan ka ogahay, waxaa ugu horreeya in wax ka beddel & dib u eegis lagu sameeyo qodobka dhigaya in “xildhibaanka laga dhigi karo wasiir ama safiir ama wixii la hal maala”, oo meesha laga saaro, laguna beddelo in aan golaha wasiirada laga soo dooran karin xildhibaanada.
Isku soo wada duub, heshiiska bulsho ee waddan walba u degsan waa in uu la jaanqaadaa oo ka jawaabaa duruufaha ku hareeraysan waddankaa isaga ah.